LEGO အတွက် အကောင်းဆုံးဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိရိယာများ - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> ကစားစရာအရုပ် >> Lego Boost >> LEGO အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲကိရိယာများ
ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား သေချာပေါက် အထင်ကြီးစေမည့် ဤအထွေထွေ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြင့် သွားပါမည်။
ဘလော့ရဲ့ နောက်လိုက်တွေ သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် linux ကိုအသုံးပြုသည်။အထူးသဖြင့် Ubuntu၊ ကျွန်တော်သည် ဤလည်ပတ်မှုစနစ်တွင် အသုံးပြုနိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲကို ရှာဖွေနေသော်လည်း Windows နှင့် Mac အတွက် ရွေးချယ်စရာများကို ချန်ထားဆဲဖြစ်သည်။
LDraw™ သည် LEGO CAD ပရိုဂရမ်များအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့၏ Legos အတွက် မော်ဒယ်များနှင့် virtual scenes များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းကို LEGO အဆောက်အဦဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့် ဖန်တီးရန်နှင့် ကာတွန်း သို့မဟုတ် 3D rendering များဖန်တီးရန် နှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြုသည်။
ထို့အပြင်၊ ညွှန်ကြားချက်ဖန်တီးမှုဆော့ဖ်ဝဲအများစုသည် LDraw စံနှုန်းပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။
၎င်းသည် cross-platform ဖြစ်ပြီး Linux၊ Windows သို့မဟုတ် Mac တွင် သုံးနိုင်သည်။
LDraw နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာနှစ်ခုလိုအပ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ အလုပ်လုပ်ရန် အပိုင်းများနှင့် အရင်းအမြစ်များ တည်ရှိရာ ဒေတာဒစ်ဂျစ်တိုက်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ကာ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖန်တီးမှုများကို ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်သည့် အယ်ဒီတာကို ထည့်သွင်းပါ။
မှတ်သားထားခဲ့တာတွေကို စုံစမ်းဖို့ ကိရိယာတစ်ခုကတော့ မမေ့နိုင်အောင်ပါပဲ။ l2cucommand line ဖြင့် LDraw နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်။ ဥပမာ Bash ဖြင့် အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် ဇာတ်ညွှန်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ကောင်းပါတယ်။
တည်းဖြတ်သူများ၊ ကြည့်ရှုသူများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၏ မီးစက်နှင့် LEGO ကာတွန်းများ
ကမ္ဘာများ၊ အနမ်းများ၊ အစုံများ၊ အစိတ်အပိုင်းများပါရှိသော စုစည်းမှုများကို ထုတ်လုပ်နိုင်စေမည့် LDraw တည်းဖြတ်သူများ
ကြည့်ရှုသူများ၊ ဤဖိုင်အမျိုးအစားကိုသာ မြင်နိုင်သည်။
LEGO ညွှန်ကြားချက်ဂျင်နရေတာများ။ စည်းဝေးပွဲတွေကို ဘယ်သူတွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပြီး မျှဝေမလဲ။
ပုံများနှင့် ကာတွန်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းဝေးပွဲများနှင့်အတူ renderings နှင့် 3D ကာတွန်းများကို ဖန်တီးနိုင်စေမည့် ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော LEGO တည်းဖြတ်သူများ. ၎င်းတို့သည် အထက်ပါရွေးချယ်မှုအားလုံး သို့မဟုတ် နီးပါးအားလုံးပါဝင်သည့် ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Studio 2.0 နှင့် LeoCAD ကို အကောင်းဆုံးအဖြစ် မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ LEGO ဘလောက်များဖြင့် ဖန်တီးနိုင်သော virtual မော်ဒယ်များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် ၎င်းကို အသုံးပြုသည်။
LDraw မှအကြံပြုထားသောအက်ပ်။ ၎င်းသည် cross-platform tool တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Linux၊ MacO နှင့် Windows နှစ်မျိုးလုံးတွင် သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လုပ်ကွက်ပေါင်း 10.000 ကျော်ပါရှိသော ဤကိရိယာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဖတ်နိုင်သည်။ LDraw LDR နှင့် MPD ဖိုင်ဖော်မတ်များ.
၎င်းကို မစမ်းကြည့်မီ၊ ပထမဆုံး ခံစားရသည်မှာ ၎င်းတွင် ပိုမိုဖော်ရွေပြီး ခေတ်မီစေရန် restyling ကို အသုံးပြုနိုင်သည့် မျက်နှာပြင်ဟောင်းတစ်ခု ပါရှိသည်။
ထို့အပြင်၊ သက်ဆိုင်ရာစာကြည့်တိုက်များနှင့်အတူ၊ Tente နှင့် Exin Castillos တို့ကို ပုံသွင်းရန်အတွက် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Bricklink မှ Studio 2.0
၎င်းသည် 2020 ခုနှစ်တွင် Bricklink ကို၎င်း၏ဖန်တီးသူထံမှဝယ်ယူခဲ့သော LEGO အမှတ်တံဆိပ်၏တရားဝင်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ Dan Jezek။
Windows နှင့် MacOS အတွက် ရရှိနိုင်ပြီး ယခုအချိန်တွင် Linux အသုံးပြုသူများသည် အဆိုပါကိရိယာကို အသိုင်းအ၀ိုင်းက လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းကို မခံစားနိုင်ပါ။ Linux တွင် Studio 2.0 ကို စမ်းသုံးလိုပါက Wine သို့မဟုတ် Gnome Boxes ကို အမြဲသုံးနိုင်သည်။
ဦးစားပေးအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် LEGO အပိုင်းများနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန် အပြည့်စုံဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ Bricklink ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူ သင်တည်ဆောက်ထားသော အပိုင်းအစများကို သင်ဝယ်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ဦးမှမျှဝေထားသည်ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
အားနည်းချက်ကတော့ Linux မှာ သုံးလို့မရပါဘူး။ Studio 2.0 သည် LDraw စံနှုန်းကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါ၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြပြီး သင်တင်ပို့ပြီး အခြားပလပ်ဖောင်းများတွင် သို့မဟုတ် အခြားကိရိယာများဖြင့် လုပ်ဆောင်သောအခါတွင် အကြိမ်များစွာ လိုက်ဖက်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည် အသေးအဖွဲအကြောင်းအရာမဟုတ်ပါ။ Mer သည် အလုပ်ကိရိယာတစ်ခုရှာသောအခါ မှတ်သားထားရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Studio 2.0 သည် ဒိန်းမတ်ကုမ္ပဏီမှ LEGO Digital Designer အဟောင်းကို အစားထိုးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ browser နှင့်အသုံးပြုရန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ရွေးချယ်စရာများစွာပါရှိသော ခေတ်မီအင်တာဖေ့စ်တစ်ခုရှိပြီး တပ်ဆင်ခြင်းအပြင် 3D ပုံဖေါ်ခြင်းကိုလည်း ခွင့်ပြုပါသည်။
LIC ပရောဂျက်ကို ရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို LEGO အတွက် ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘရောက်ဆာမှ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည့် ဝဘ်အက်ပ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၎င်းသည် သင်၏ lDraw ဖိုင်ကို သင်တင်သွင်းနိုင်ပြီး သင်လုပ်နိုင်သည့် ဝဘ်အယ်ဒီတာဖြစ်သည်။ ညွှန်ကြားချက်များကိုဖန်တီးပါ။. ထို့ကြောင့် ဤကိရိယာသည် ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပေးရန် သီးသန့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
LDraw ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော မော်ဒယ်များ၏ ဖြတ်ကျော် ပလပ်ဖောင်း တည်းဖြတ်သူ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အနှစ်သက်ဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် ယခင်ကိရိယာများထက် ပိုမိုအခြေခံရှိပြီး ပံ့ပိုးမှုနည်းပါသည်။
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်သည် 2020 မှဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် ခေတ်နောက်ကျနေသောဆော့ဖ်ဝဲလ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဆက်သွားခြင်းမရှိသည့်အတွက် မကြိုက်ပါ။ ဂရပ်ဖစ်အင်တာဖေ့စ်ကိုလည်း ကျွန်တော်သိပ်မကြိုက်ဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းတို့သည် စာတမ်းပြုစုခြင်းနှင့် ဇာတ်ညွှန်းရေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အလွန်စိတ်ထိခိုက်မိပါသည်။
LDView သည် ဟာ့ဒ်ဝဲ-အရှိန်မြှင့်ထားသော 3D ဂရပ်ဖစ်ကို အသုံးပြု၍ LDraw မော်ဒယ်များကို ပြသရန်အတွက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ 3D ကြည့်ရှုသူဖြစ်သည်။ LDraw ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အတွက်၊ LDraw အတွက် ဗဟိုအချက်အချာကျသော ဆိုက် www.ldraw.org သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ပရိုဂရမ်သည် LDraw LDR/DAT ဖိုင်များအပြင် MPD ဖိုင်များကို ဖတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် မော်ဒယ်ကို မောက်စ်ဖြင့် မည်သည့်ထောင့်သို့ လှည့်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
MacOS အတွက် Virtual LEGO မော်ဒယ်လ်။ ၎င်းသည် MAC အတွက်သာအလုပ်လုပ်သည်၊ ဤအထူးပြုချက်သည် Apple ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ခိုင်မာသောအချက်ဖြစ်စေနိုင်သည်၊ သို့သော် Studio 2.0 သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။
LPub3D သည် ဖန်တီးရန်အတွက် open source WYSIWYG တည်းဖြတ်ရေးအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
LEGO® စတိုင် ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆောက်အဦ လမ်းညွှန်ချက်များ။ ၎င်းသည် ညွှန်ကြားချက် ဂျင်နရေတာ တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်သည်။
၎င်းကို LDraw စံနှုန်းပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး Linux အတွက် AppImage အဖြစ်လည်း ရနိုင်ပါသည်။
Blender ချစ်သူများအတွက် Lego အပိုင်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန် အခကြေးငွေပေးရသည့် Add On တစ်ခုရှိသည်။ ဤကိရိယာကြီးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုနည်းကို သင်ကောင်းစွာသိပါက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာ သေချာပါသည်။ addon က ဘယ်လောက်အထိ ဖွံ့ဖြိုးလာသလဲ မသိပေမယ့် သူ့မှာ blocks ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
LDraw သို့ တင်ပို့ခွင့်ပြုသည်။
SolidWorks အတွက် LegoBlock
LEGO ဖြင့် SolidWorks တွင်အလုပ်လုပ်ရန်လုပ်ကွက်များရှိသည်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို မသုံးတော့တဲ့အတွက် လေးလေးနက်နက် မစဉ်းစားမိပါဘူး။ ၎င်းသည် စျေးကွက်ရှိ အကောင်းဆုံး CAD များထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဝါသနာရှင်တစ်ဦးအတွက် ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် တားမြစ်ထားသည်။
ဤရွေးချယ်မှုကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည်ကို သိသော SolidWorks အသုံးပြုသူရှိလျှင် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်ဖော်ပြပါမည်။
categories Lego Boost လက်မှတ်အညွှန်း
1 LDraw စံနှုန်း
2 တည်းဖြတ်သူများ၊ ကြည့်ရှုသူများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၏ မီးစက်နှင့် LEGO ကာတွန်းများ
2.2 Bricklink မှ Studio 2.0
2.4 ဝဘ်ဆိုဒ် SCI
2.10 SolidWorks အတွက် LegoBlock